आज पत्रकार रबि लामिछानेको जन्म दिन , कति बर्ष लागे रबि ? -
काठमान्डौ । आज चर्चित पत्रकार रबि लामिछानेको जन्म दिन परेको छ | रवि लामिछानेको जन्म (१९७४-०९-०५) सेप्टेम्बर ५, मा भक्तपुर मा भएको थियो ।सन् २०१३ को अप्रिलमा नेपालको न्युज 24 टेलिभिजनमा निरन्तर ६० घण्टाभन्दा बढी समय टेलिभिजन अन्तर्वार्ता चलाएर उनले विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् ।रवि लामिछाने अहिले न्युज २४ टेलिभिजनबाट सिधाकुरा जनतासंग कार्यक्रम चलाउछन्।
यो पनि रवि लामिछाने प्रकरणमा कसरी फस्यो प्रहरी ?
काठमाडौं । निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रहरीमाथि लागेको दाग अझै मेटिएको छैन । अनुसन्धानमा चरम लापरबाहीका कारण गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रमै प्रहरी बदनाम भयो । तर, अझै प्रहरीले पाठ सिकेको छैन । लोकतान्त्रिक देश नेपालमा प्रमाणभन्दा पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावका भरमा प्रहरी अनुसन्धान हुने गरेको रवि लामिछाने प्रकरणबाट थप प्रष्ट भएको छ । यो घटनाले प्रहरीप्रतिको विश्वसनियता झन् धरमराएको छ । भिडियो मृतक पुडासैनीकै परिवारबाट बाहिरिएको भनेर प्रहरीले प्रचार गर्न लगाएको थियो । तर, मृतकका आमा–बुबाले आफूहरुमाथि गलत आरोप लगाएको भन्दै रोएका थिए । बरु, आफूहरुले नै भिडियो बाहिर दिएको भनेर बोल्न अप्रत्यक्ष रुपमा प्रहरीले पुडासैनीका बुबाआमालाई दबाब दिएको भनेर समेत मिडियामा गुनासो गरेका छन् । यसले पनि अनुसन्धानमा कति चलखेल भएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा दबाबको भरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको अदालतले नै प्रष्ट पारिदिएको छ । आत्महत्या गर्नुअघि पुडासैनीले चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने, उनकै टिमका पत्रकार युवराज कँडेल र प्रेमिका अस्मिता(रुकु) कार्कीले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भनेर भिडियो खिचेका थिए । उनले भनेको कुरालाई पुष्टि गर्ने प्रमाण नै नखोजी प्रहरीले सोही आधारमा कसैको दबाबमा तीन जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । नेपालको कानूनले आत्महत्यालाई नै अपराध मानेको छ । गत वर्षदेखि लागू भएको आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धि कानूनले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेलाई पनि मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानूनमा कस्तो अवस्थालाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको भन्ने उल्लेख छैन । जसकारण प्रहरीबाट यो कानूनको दुरुपयोग हुन थालेको छ । पुडासैनी प्रकरणमा पनि प्रहरीले अष्पष्ट कानुनको आधारमा चलखेल ग¥यो ।
पुडासैनीको भिडियोलाई मात्र आधार बनाएर प्रहरीले दबाबको भरमा तीन जनालाई पक्राउ ग¥यो । तर, भिडियोमा भनिएअनुसार उनीहरुले कसरी आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएका थिए भन्ने एउटै प्रमाण प्रहरीले संकलन गर्न सकेन । विवाहित रहेका पुडासैनी नर्स कार्कीसँग प्रेम सम्बन्धमा थिए । आफू अविवाहित रहेको भनेर झुक्याएर उनले प्रेम गरेका थिए । जुन कुरा कार्कीले थाहा पाएपछि उनीसँग टाढिन खोजिन् । जे गर्दा पनि नसकेपछि उनी उनका पूर्व सहकर्मीहरुलाई भेट्न न्यूज २४ गइन् । जहाँका क्यामरापर्सन अलिन ढुंगेलसँग उनको चिनजान थियो । उनीसँगकै कुराकानीमा थप दुःख दिए सिधा कुरा जनतासँगमा कार्यक्रम बजाइदिने भन्दै धम्की दिन उनले सुझाए । त्यहीअनुसार उनले न्यू २४ टेलिभिजनमा गएको सेल्फी खिचेर पठाइन् । त्यही आधारमा आफ्नो बेइज्जत हुन लागेको ठानेर पुडासैनीले आत्महत्या गरेको प्रमाणहरुले देखाउँछ ।
युवतीको म्यासेजकै आधारमा उनले रवि लामिछाने आफूविरुद्ध लागेको ठानेर नै उनले आत्महत्या गरेको देखिन्छ । त्यही आधारमा उनले त्यस्तो भिडियो बनाएका छन् । जबकी न त लामिछानेको उनकी प्रेमिकासँग भेट भएको छ न त उनले त्यसबारेमा कुनै धम्की नै दिएका छन् । प्रहरी अनुसन्धानमा त्यो केही खुल्न सकेको छैन । भिडियोकै आधारमा त्यसरी प्रहरीले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । अर्का पत्रकार कँडेलले काम गर्ने क्रममा हेप्ने भएकाले उनलाई समेत पुडासैनीले भिडियोमा पोलेका छन् । त्यही कारण उनीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ । आत्महत्या घटनामा भिडियो तथा सुसाइड नोट मात्र प्रमाण हुन नसक्ने फौजदारी कानूनका ज्ञाता बरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली बताउँछन् । सुसाइड नोटमा लेखिएका कुरालाई पुष्टि गर्ने अन्य प्रमाण नभएसम्म मुद्दा चलाउन नमिल्ने उनको भनाई छ ।
यो प्रकरणमा चितवका एसपी दानबहादुर मल्लको सबैभन्दा शंकास्पद भूमिका देखिन्छ । रविको कार्यक्रमबाट पीडित भएको एक समूहले उनै एसपी मल्ललाई उकासेर लामिछानेलाई पक्राउ गर्न लगाएको बुझिन्छ । गोप्य भिडियो समेत उनै एसपी मल्लले ‘बेचेको’ आरोप लागेको छ । अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै सो भिडियो बाहिरिएको थियो । सोही भिडियो बाहिरिनुलाई समेत अदालतले शंकास्पद रुपमा लिएको छ । भिडियो पहिले नै बाहिरिनुले भिडियो दूषित भएको हुनसक्ने न्यायधीश हेमन्त रावलको आदेशमा भनिएको छ । सो भिडियो मृतक पुडासैनीकै परिवारबाट बाहिरिएको भनेर प्रहरीले प्रचार गर्न लगाएको थियो । तर, मृतकका आमा–बुबाले आफूहरुमाथि गलत आरोप लगाएको भन्दै रोएका थिए । बरु, आफूहरुले नै भिडियो बाहिर दिएको भनेर बोल्न अप्रत्यक्ष रुपमा प्रहरीले पुडासैनीका बुबाआमालाई दबाब दिएको भनेर समेत मिडियामा गुनासो गरेका छन् । यसले पनि अनुसन्धानमा कति चलखेल भएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
सो घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीबाट विभिन्न त्रुटि र लापरबाही अदालतले पत्ता लगाएको छ । अनुसन्धानमा मुख्य गरी तीन विषयमा प्रहरीले प्रश्न उठाएको छ । अभियोजनमा मृत्युको समय नै उल्लेख गर्न नसकेको कुरा आदेशमा उठाइएको छ । भिडियो रेकर्ड गर्दा पुडासैनी भित्री बस्त्रमा थिए । झुन्डिएको अवस्थामा उनी सर्ट पाइन्टमा थिए । ‘यो फरक देखिने अवस्थाले भिडियोमा व्यक्त गरेको भनाई नै ‘वर्डस् विफोर डेथ अफ डाइङ पर्सन’ थियो वा थिएन भनी यकिन गर्न भिडियो रेकर्ड गरिएको समय र निजले आत्महत्या गरी देहत्याग गरेको समयको अन्तर छुट्याउन सबुतको रुपमा रहेको भिडियो र मृतकको शव परिक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको समय उल्लेख हुनु आवश्यक देखिन्छ । जून अनुसन्धानका क्रममा गरिएको शव परिक्षण्को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिदैन ।’ पोष्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्युको समय खुल्ने भएपनि यो अनुसन्धानमा खुलाइएको छैन । अदालतले पोष्मार्टममा संलग्न त्रिवि शिक्षक अस्पतालका चिकित्सक डा. मणि शर्मा र विभूती शर्मालाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ ।
साथै भिडियोमा उल्लेख विषयलाई अन्य सहयोगी प्रमाण पेश गर्न नसकेकाले निर्णायक प्रमाणका रुपमा लिन नसकिने आदेशमा उल्लेख छ । मृतकले भिडियोमा लगाएका आरोपलाई पुष्टि हुने किमिसका अन्य प्रमाण प्रहरीले संकलन गर्न नसक्दा मुद्दा फितलो भएको यसबाट प्रष्ट हुन्छ । प्रमाणहरु बलियो नहुँदा नै आरोपीहरु छुटेका छन् । जसले सो मुद्दा दबाबको भरमा मात्र चलेको प्रष्ट हुन्छ । रवि लामिछानेबाट डराएको समूह नै उनलाई नियोजित रुपमा यही मौकामा फसाउने खेलमा लागेको र प्रहरी त्यसमा प्रयोग भएको प्रहरीको फितलो अनुसन्धानबाटै खुलिसकेको छ । जसमा उनीहरु असफल भएका छन् र प्रहरीले थप बदनामी मात्र कमाएको छ । दृष्टि न्यजबाट
प्रकाशित मिति १९ भाद्र २०७६, बिहीबार १५:३२